आज ह्वात्तै बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, अन्य कुन देशको कति ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/आज ह्वात्तै बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, अन्य कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज वैशाख ९ गते (मंगलबार) अमेरिकी डलरसहित धेरै देशको विनिमयदर ह्वात्तै बढेको छ । यूरोपियन यूरो र यूके पाउण्डको भाउ भने घटेको छ।आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२२ रुपैयाँ १६ पैसा तथा बिक्रिदर १२२ रुपैया ७६ पैसा पुगेको छ ।
सोमबार डलर १२१ रुपैयाँ ९३ पैसामा खरिद बिक्री भएको थियो। यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १ सय ३२ रुपैयाँ ६२ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३३ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १ सय ५१ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रिदर १ सय ५२ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ।
साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ। युएई दिराम एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ २६ पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ४२ पैसा रहेको छ।
मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ९४ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ८ पैसा रहेको छ।कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ९२ रुपैयाँ १८ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ९४ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय २३ रुपैयाँ ५७ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय २५ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ।